Tratran'ny polisy ireo olona 22 mpanendaka, mpamaky trano, mpanao vola sandoka, mpidoroka rongony. Saika hanome kolikoly 800.000 Ar ny sasany • Madagossip
il y a 1 année 1.8 K
Namely mafy ny CSP4: Faritra IVO, 3G HANGAR, Ambodin’Isotry, Andranomanalina sy Bazar MA. Olona miisa 22 no voasambotra tao anatin’ny herinandro, ahitana mpanendaka, mpanao sinto-mahery, mpamaky trano, mpividy halatra, mpanao vola sandoka. mpidoroka rongony miisa telo ihany koa no tra-tehaka tamin’ny fisafoana amin’ny andro alina niaraka tamin’ny vola 800.000 ar, ary saika mbola nihevitra ny hanome kolikoly sy tsolotra ireo polisy ihany kanefa dia nanda avy hatrany ireto farany.
Voasokajy ho anisan’ireo faritra iva sy faritra mafàna tokoa raha iny fari-piadidian’ny kaomisarian’ny boriboritany faha-4 iny (CSP4). Tsy mitarain-tana-miepaka amin’izany anefa ireo tompon’andraikitra izay voatendry isahana ny fandriam-pahalemana amin’iny faritra iny, ary dia misy ny vokatra azo tsapain-tanana isan’andro na dia tsy tonga eny amin’ireo vahoaka aza ny akon’izany.
Mitohy tsy tapaka ihany anefa ny ezaka fampandriana fahalemana izay ataon’ny Commissariat eny ambodin’Isotry amin’ny famongorana ireo mpanao ratsy.
Amin’izao fitaom-pahavaratra izao, miampy ny fahatapahan’ny herin’aratra sy ny fiatrehana sahady ny fetin’ny Paska, dia miha-mahazo vahana ireo mpanao ratsy. Ka tsy niandry izay mety ho figadony ny Polisin’ny boriboritany faha-4, fa avy hatrany dia namely mialoha tamin’ny fanaovana « Opération coup de poing », « ratissage » sy fisavàna ireo olona mampiahiahy nisesisesy tao anatin’ny roa herinandro izay.
Fisafoana andro sy alina, fidinana tampoka eny amin’ireo faritra mafàna, fisamborana ireo mpanao sinto-mahery amin’ny alalan’ireo Polisy manao fanamiana sivily, fandravàna ireo toerana fieren’ireo mpidoroka rongony sy fanomanany mialoha ny asa ratsiny.
Tsy azo hodian-tsy hita izany rehetra izany, ary tao anatin’izany indrindra no nahatratrarana ireto olona miisa enina ambin’ny folo ireto (16) izay ahitana mpamaky trano, mpividy ireo entana halatra, mpanendaka, mpanao vola sandoka, mpanao sinto-mahery, ary mpidoroka rongony.
Tao anatin’izany :
– Ny andron’ny Zoma 23 febroary 2018, fidinana tampoka teny amin’ny arrêt Ambatondrazaka etsy Antohomadinika no nahatratrarana ambody omby mpanendaka miisa enina (06), efa natolotra ny fampanoavana ny asabotsy teo moa izy ireto ary efa notanana am-ponja ny dimy raha toa ka nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny iray.
Commissariat de police Ambodin’Isotry
– Cyber café iray tetsy amin’ny Aigle Noir Ambodin’Isotry no nisy namaky tamin’ny 2 ora maraina ny asabotsy 24 febroary teo, raha vantany vao nahare ny antso ny Kaomisarian’ny boriboritany faha-4 dia nidina teny an-toerana nanao sava hao ny manodidina sy ny fanarahan-dia, vokany : ny andron’io ihany dia lehilahy miisa roa no tratra dia i « Rahery » sy I « Mainty » izay mpamaky trano sy mpandray ireo entana halatra, izay marihina fa vao nivoaka ny fonja ny iray amin’izy ireto. Tratra tao an-tranony ireo entana maro toy ny « écran plat », « subwoofer », « ordinateur portable », « ordinateur complet » maromaro, « imprimante » sns. Ireo namany izay namaky ilay « cyber café » kosa tafaporitsaka rehefa nifanenjehana tao anatin’ny aizina eraky ny elakelatrano, efa fantatra avokoa moa ny mombamomban’izy dimy lahy (05) ireo ary inoana fa tsy ho ela dia ahitam-bokany ny tohin’ny fikarohana.
– Ny asabotsy alina faha-24 ny volana febroary teo, vehivavy iray mpanao vola sandoka sy mpanaparitaka izany no tra-tehaka teny amin’ny faritra « R plus 5 », mbola ao anatin’ny fanadihadiana ireo mpanao famotorana ao amin’ny boriboritany faha-4.
– Ny asabotsy alina 24 ny volana febroary teo ihany, lehilahy miisa telo no tratra teo am-pifohana rongony tao anaty toerana maizina iray. Raha iny nandalo nanao fisafoana ny elakelantrano eny amin’ny IVO iny ny Polisy dia nopihin’izy ireo ny jiro ary niafina tao anaty aizina izy ireo, tra-tehak’ireo Polisy niaraka tamin’ny rongony sy ny vola 800.000 ar izay tsy fantatra mazava ny fiaviany, ary mbola saika hataon’izy ireo tsolotra homena an’ireo Polisy ihany izany vola izany, kanefa dia nandà avy hatrany ireto farany.
Ezaka Commissariat de police Ambodin’Isotry
– Tovolahy miisa enina ihany koa no voasambotra nandritra ny fisafoana ny asabotsy ariva teo teny amin’ ireo faritra iva sy ireo toerana malaza fieren’ireo tontakely. Manendaka sy manao sinto-mahery amin’iny faritra IVO, 3G Hangar, Ambodin’Isotry, Andranomanalina sy Bazar Ma iny izy ireto rehefa avy miloka manao “Baby foot” ka lany vola, mbola misy moa ny tsy ampy taona amin’izy ireo. Nosamborina ihany koa ny ramatoa iray izay tompon’ny toerana fieren’ireto tontakely ireto izay mahafantatra tsar any fisian’izany toe-javatra izany.
– Miisa 12 ihany koa ireo olona izay nampiahiahy nosavaina ary noentina teny amin’ny kaomisaria nandritra izany hetsika izany, rehefa nazava moa ny nahakasika azy ireo dia nalefa namonjy ny fodiany avy, fa kosa noraisina an-tsoratra ny mombamomba azy ireo rehetra.
CSP4 – Commissariat de police Ambodin’Isotry
Manentana hatrany ny avy eo anivon’ny Kaomisarian’ny boriboritany faha-4, fa zava-dehibe tokoa ho azy ireo ny fanomezam-baovao avy amitsika vahoaka, ho arovana ny loharanom-baovao. Mankasitraka hatrany antsika izay efa tsy misalasala mampita ny vaovao.
Laharana finday Kaomisaria boriboritany faha-4 : 034 05 517 30
Source : Polisim-pirenena
Tagsambodin'isotry insécurité mpanendaka police